Decidesnye na-ekpebi aha oké ifufe ahụ? | Network Meteorology
na ajọ ifufe Ha bụ ihe omimi nke ihu igwe nke, nke hụrụ site na satịlaịtị, a na-ahụta ya dị ka usoro ahaziri nke ọma, na ọbụlagodi nwere ọmarịcha mma. Otú ọ dị, ha na-ebibi ihe onwunwe dị ukwuu ma nwee ike igbu ndụ ọtụtụ narị mmadụ, dị ka Hurricane Matthew mere na Haiti.
Ma onye na-ekpebi aha oké ifufe ahụ? NA, Gịnị mere ha ji enwe aha ha?
Aha ndepụta maka oke ikuku mmiri nke na-etolite na Atlantic Ocean kere na 1953 site na National Hurricane Center nke United States (NHC). Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ndepụta a dị ka ọkọlọtọ maka ndepụta nke mpaghara ndị ọzọ nke ụwa, ma emelitere ya site na World Meteorological Organisation (WMO), nke bụ ụlọ ọrụ nke United Nations dabere na Geneva (Switzerland).
Ahaziri aha ajọ ifufe n’usoro mkpụrụ akwụkwọ, ewezuga mkpụrụedemede Q, U, X, Y, na Z, na aha nwoke na nwanyị ọzọ. Aha dị iche iche maka mpaghara ọ bụla, nke mere na enwere ike ịnye ọkwa ma ọ nweghị ọgba aghara.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dị iche, a na-eji aha, ọ bụghị naanị na Bekee, kamakwa na Spanish na French. Ọzọkwa, na-emegharị kwa afọ isii, ma enwere ụfọdụ ịkwụsị iji ya ma ọ bụrụ na ajọ ifufe a na-ekwu okwu ya emebiwo, dịka o mere na Katrina, nke gburu mmadụ 2000 na New Orleans (USA) na 2005, dịka ọmụmaatụ.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ọ ga-kwuru na ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-akpọkarị aha ụmụ nwanyị n'oge Agha Worldwa nke Abụọ: aha ndị nne ha, ndị nwunye ha ma ọ bụ ndị hụrụ ha n'anya, kọwara Koji Kuroiwa, bụ isi nke mmemme WMO tropical cyclone. Malite na 1970s, aha ndị nwoke agbakwunyere iji zere ahaghị nhata nwoke.
Agbanyeghị, ajọ ifufe ụmụ nwanyị na-egbu ọtụtụ mmadụ karịa ndị nwere aha nwoke, dịka a ọmụmụ site na Mahadum Illinois (USA). Ihe kpatara ya bụ na anaghị ejibu ndị nke mbụ akpọrọ ihe nke ukwuu, yabụ anaghị ewere usoro ịkwadebe dị mkpa iji mesoo ha. Maka nke a, National Hurricane Center kwusiri ike na, n'agbanyeghị aha ajọ ifufe, gbado anya kwesiri na egwu egwu nke obula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Nye na-ekpebi aha oké ifufe ahụ?
Anyị na-eme ma ọ bụ na-eche mgbanwe ihu igwe?